CHIMWE - NAB Ratidza Nhau ne Broadcast Beat. Mutasviki wezveNhepfenyuro weNAB Ratidza, Mugadziri weNAB Ratidza LIVE
musha » OTHER
Kana tisingatauri 2017 NAB Kuratidza Pamberi-Masangano, tinenge tichibva kunze kwechimwe chinhu chinonakidza chinobatanidzwa neNAB Show! Tarisa pasi apa uye chengeta paNAB Ratidza zvido zvepato kuti uwane mamwe mashoko, sevamwe vari vega, kuburikidza nekukoka chete kana kuva nemhosva yekugamuchira. Iyi ibhuku rinomhanya uye rakanyanyisa iwe uchawana! Isu ...
Chinhu Chikuru Chinoitika kune Vaparidzi: Zvimotokari Zvimotokari?
Sezvo nhau yemabhizimusi inoshanduka, nzvimbo dzekugara dzinofanira kukwikwidzana nezvinhu zvekuInternet, mapurojekiti akazvimirira, nhepfenyuro yenyika, uye mune dzimwe nguva, zvivako zvikurusa munzvimbo dzakapoteredza nzvimbo. Mukufananidza, mari inoshandiswa nemamwe marudzi ezvinyorwa zvakagadziriswa ave zvishoma zvoupfumi yezvivako zvekutenga, apo vateereri vanotarisa kune zviteshi zvekugara kuti vape zvatinogona kuwana pane imwe nzvimbo. Saka, sei ...
Comcast, FX Test Live Live / VOD Hybrid for 'The Bridge'
[Ad_1] Broadcasting & Cable zvinyorwa "Comcast yakatsigira kuti MSO naFX vakangovhara muedzo umo vatariri vaizoona chikamu chinotevera cheThe Bridge paVOD Chitatu usiku. ". [Ad_2]
Hurukuro Dzakakurumidza Kuvhura paChibox One
[Ad_1] GamesIndustryBiz inoshuma "IXbox One ichava pamba purogiramu itsva iyo inoita kuti vashandisi varambe vaine ziso pamusangano webhutano hwemakambani Reddit, Microsoft Larry Hyrb yakaratidza.". [Ad_2]
Perfect World Doubles Kubatsirwa muQ2
[Ad_1] GamesIndustryBiz inoshuma "Mushandi weChinese muInternet Perfect World akawedzera zvikwereti zvayo muvhareji yechipiri yekarani mushure mekushanda kwakasimba kudarika iyo yose yemahofisi.". [Ad_2]
Guillemot: Wii U vadzidzisi Musatengi "Mitambo Yakakura"
[Ad_1] GamesIndustryBiz inoshuma "Ubisoft CEO Yves Guillemot akapa gakava kuongororwa pa Wii U, achiti haisi chikwata chemitambo yakakura.". [Ad_2]
GuardiCore Inokurudzira $ 11 Mamiriyoni Kuti Dzivirire Dheinesi Dhainasi kubva mukati
[Ad_1] VentureBeat inoti "Isu tose tinoziva kuti kudzivirira kushorwa kubva pakuwana nzvimbo dzekushandisa hakubatsiri.". [Ad_2]
Nuzzel inokupa iwe List List of Top Founders uye Investors
[Ad_1] VentureBeat inonzi "Social news aggregator Nuzzel iri kubudisa zvishoma zvemashoko ezvekudya zvemashoko anoratidza izvo vavaki nevashambadziri pamakambani makuru ekutengeserana ari kuverenga zuva rega rega.". [Ad_2]
Basa reMimhanzi yeYouTube rinoparidzirwa Rinowana Zita uye $ 10 pamutengo wemwedzi wemwedzi
[Ad_1] VentureBeat inoshuva "Nzvimbo yepurogiramu yemavhidhiyo yemuvhidhiyo yeGoogle yepurogiramu yemavhidhiyo yeGoogle ichaita sainzi" YouTube Music Key, "maererano neshumo kubva kuIndaneti Mapurisa.". [Ad_2]
LG kuti Iite Yakawanda yeMafoni ayo 'Interfaces Kuonekwa seG3
[Ad_1] VentureBeat inonzi "LG G3 smartphone yakashamiswa gore rino: Ndiyo foni yekutanga kubva kuKorea magetsi makuru anogona kuenda kune-to-toe nezvakanakisisa zveApple neSamsoni.". [Ad_2]
Coinbase Inowana Blockchain Explorer Blockr.io
[Ad_1] TechCrunch inorondedzera "Kudukuka kwechidiki muBitcoin nzvimbo inoenderera mberi semakambani makuru, ari nani-mari inobhadhara mari yezvikwata zvevarimi vane tarenda uye vanjiniya.". [Ad_2]
AppNexus Inomutsa $ 60 Million Round Kukoshesa Ad-Tech Company pa $ 1.2 Bhiriyoni
[Ad_1] TechCrunch inoshuma "App tekambani yeAd Ad AppNexus yakangozivisa kuti yakasimudza mamwe $ 60 mamiriyoni.". [Ad_2]
BigColors Inotenga GetViable kupa Zvimwe Zvinyorwa kuAsia-Pacific neUnited States Startups
[Ad_1] TechCrunch inoshuma "Bigcolors, kuHong Kong-kutangira boka guru rekudzidzira uye chekuita mari yakasimba, yakagamuchira GetViable, iyo inobatanidza zvigadzirwa zvekutanga nheyo, nokuda kwechimwe chikero chisingazivikanwi.". [Ad_2]
Sympler Inopa Nzira Yakanakisisa Yokuita Kufara, Mavhidhiyo-Mavhidhiyo Makore
[Ad_1] TechCrunch inoshuma "Co-founders Ben Jenkins naAlexander Kane vakagumburwa nehofisi yeTechCrunch munguva pfupi yapfuura kuti varatidze Sympler, vhidhiyo yavo yevhidhiyo yeIOS.". [Ad_2]
Chokwadi Chinokutumira Kutumira Anonymous Texts
[Ad_1] TechCrunch inoshuma "NeWhisper uye Chakavanzika kuwedzera mamirioni emadhora kuti avake mabasa asina kuzivikanwa, marudzi ose ezvidzidzo ari kubuda izvo zvinokugoverana zvinhu kunze kwekuti uwedzere unhu hwako.". [Ad_2]
Tora Vhidhiyo ipi neipi ye YouTube muGIF kuburikidza nekubatanidza "GIF" Ku URL "
[Ad_1] TechCrunch nhepfenyuro "Unoda kuchinja chimwe chinhu pa YouTube muGIF, asi haufaniri kuuya nekutora mapepa evanhu vatatu kana kutsvaga kune yekutenderera paIndaneti?". [Ad_2]
Page 1 pamusoro 3123	»
Hey Buddy !, Ndakawana mashoko aya kwauri: "2017 #NABShow Party List". Heino chibatanisi chewebhu: https://www.broadcastbeat.com/2017-nabshow-party-list/. Ndatenda.